ओलीकाे आराेप : ‘प्रचण्ड र नेपाल अस्थिरताका संवाहक हुन्, एकता गरेर जाने अवस्था छैन’
काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अस्थिरताका संवाहक शक्तिको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र नेपालकै कारण देश स्थिरता र स्थायित्वतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको दाबीसमेत गर्नुभयो । ललितपुरको च्यासलमा रहेकाे तुलसीलाल अमात्य स्मृति भवनमा आज बुधवार आयोजित पार्टीका मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कतिपय बाह्य शक्तिले देशमा नियन्त्रित अस्थिरता मच्चाउन क्रियाशील रहेको र त्यसको संवाहक शक्तिको रूपमा प्रचण्ड र नेपालले काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने यस्ता तत्त्वहरूसँग एकता गरेर जाने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले प्रचण्ड र नेपालकाे कनेक्शन कहाँ छ ? भन्ने कुरा पनि आफूहरूलाई थाहा भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले देश दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको छ । यसलाई अलि समन्वयात्मक ढङ्गले सुव्यवस्था, सुशासन र समृद्धितर्फका हाम्रा प्रयासहरूमा सिङ्गो देश केन्द्रित हुनु पर्दथ्यो । तर भएन, भएको छैन र यतापट्टि जाने स्थिति पनि देखिँदैन । किनभने अस्थिरता मच्चाउन खोज्ने शक्तिहरू क्रियाशील छन् । नियन्त्रित अस्थिरता । खुलस्त भनिराखेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा त्यो भनिराखेका छन् र त्यसका लागि र ती काम गर्ने शक्ति चाहिँ यहाँ छ । अहिले ती शक्तिहरूमा सबैभन्दा चर्को गरी चल्ने प्रचण्ड एन्ड कम्पनी र माकुने एन्ड कम्पनी । सबैभन्दा अहिले अस्थिरताका संवाहक तत्त्वहरू यिनै हुन् । यसमा कुनै भ्रम राख्नुपर्दैन । यस्ता अस्थिरताका शक्तिहरूसँग एकता गरेर कहीँ पुगिन्छ ? त्यो एकीकरण सम्भव नै छैन । हामीले राम्ररी चिनिसकेका छौँ, यिनको कनेक्शन कहाँ छ ? तार कहाँ जोडिएको छ ? कहाँबाट स्विच अन–अफ हुन्छ । यो हामीले देखेका छौँ । छर्लङ्गै देखेका छौँ ।’
अध्यक्ष ओलीले माओवादीले जनयुद्ध भनेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम विगतमा पनि गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयाे, ‘महान् जनयुद्ध भनेर युवा र जनतालाई, महिलालाई दुर्गम ठाउँबाट उरालियो । सुगम ठाउँबाट उरालियो । युवाहरू ज्यान दिन तयार भए, होमिए परिवर्तन भनेर । हतियार कहाँबाट आयो ? त्यतापट्टि फर्किएर हेर्न दिइएन । एउटा सेन्टिमेन्ट ल्याइयो । तर यति बुझिएन, यति हेरिएन । कहाँबाट कसले हतियार दिँदैछ नेपालमा ? अस्थिरता ल्याउनलाई । नेपालमा जनयुद्ध नामको सफल हुँदैनथ्यो किनभने सफल गर्न सुरु गरेकै होइन । त्यो त अस्थिरता सिर्जना गर्न, त्यो त एउटा बार्गेनिङ चिप्स हो । महान् क्रान्तिको सेन्टिमेन्ट त्यतातिर लगियो । बुझ्न उनीहरूले राम्ररी पाएनन् । के गर्न खोजिँदैछ त ? र मामुली कर्मचारी, मामुली पेड मान्छेहरू नेता भए । धोकापूर्ण ढङ्गले र देशले अलि दुःख पायो ।’